China Potentiometric Titrator Verification ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Potentiometric Titrator > ဘက်စုံသုံးအလိုအလျောက် Potentiometric Titrator > Potentiometric Titrator အတည်ပြုခြင်း
Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း isahigh-precision electrochemical analysis instrument for volumetric analysis using potentiometric titration method. It adopts modular design and consists of volumetric titration device, control device and testing device. It can carry out acid-base titration, REDOX, precipitation and complexation titration. The instrument has the functions of constant titration, micro titration, end-point setting titration, volume setting titration and mode titration. Users can also build their own special titration methods according to their actual needs.
1. Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း Introduction
ဥပမာ-အက်ဆစ်-အခြေခံသန့်ရှင်းရေး၊ oxalic acid (aqueous phase/non-aqueous phase) ပါဝင်မှု
Redox titration၊ အိုင်အိုဒင်းတန်ဖိုး၊ သံ (II) ပါဝင်မှု
မိုးရွာသွန်းမှုပမာဏ၊ ဥပမာ - ကလိုရိုက်ပါဝင်မှု
Complexometric titration ဥပမာ၊ ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မှု၊
polarized electrodes များ (Ipol, Upol)
2. Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း Parameter
MEAS: pH / mV / T ကိုတိုင်းတာသည်
CAL: pH စံကိုက်ညှိခြင်း (အချက်ပေါင်းများစွာ)
MET: ညီမျှသော titration
DET: Dynamic Titration ကို
Titration mode ကို
2*USB, 232 အမှတ်စဉ် port, Ethernet
built-in titration ဆေးပမာဏ ၄ ချပ်
1ml 5ml 10ml 25ml 50ml (10ml စံ)
၁၀ စက္ကန့် (၁၀၀% အားဖြည့်အမြန်နှုန်း)
ဆော့ဝဲပါသော PC (optional ကွန်ပျူတာ)
နမူနာအမြောက်အမြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် GT စက်ရုပ်နမူနာစနစ်နှင့်တွဲသုံးနိုင်သည်
Self-check function ကို
စံကိုက်ညှိ function ကို
လျှောက်လွှာတည်းဖြတ်ရေး function ကို
FDA, GMP, GLP တို့ကိုလိုက်နာပါ
စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ အဆင့်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်
PTFE titration line (corrosion ခံနိုင်ရည်)
Overhead spiral stirrer (သို့) သံလိုက်မွှေစက်
တင်သွင်းသော anti-corrosion rotary valve
Micro Detection လျှပ်ကူးပစ္စည်း
Micro syringe စုပ်စက်
3. Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း Feature And Application
ချန်နယ် ၄ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၁၆ (JH-T9)/၂၀ (JH-T9B) ဘူတာရုံ rotary autosampler တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ဆေးပမာဏများစွာယူနစ်ကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီး burette နှင့်ပိုက်လိုင်းသည်အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီနှင့်သံချေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။
တင်သွင်းသော anti-corrosion PTFE rotary valve, PTFE anti-corrosion burette, high-stirring stirring table, coil ကိုသုံးပြီးသံလိုက်မွှေစက်ရရှိရန်
တိကျသော titration သေချာစေရန် High-precision closed-loop control
တိကျသော burette သည် ၀.၀၀၃ မီလီမီတာအထိတိကျသည်
ပိုက်လိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ တံဆိပ်ခတ်ထားသောဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးအစားထိုးရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်
titration မျဉ်းကွေးနှင့်တိုင်းတာမှုရလဒ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြရန်၊ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်
acid-base titration, redox titration, precipitation titration, complexometric titration, non-aqueous titration နှင့်အခြား titration နည်းလမ်းများ
GMP စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ titration ရလဒ်များသည် GLP လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်
အလိုအလျောက်နမူနာတင်ခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းများကိုအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းခြင်း၊ စမ်းသပ်ရလဒ်များအားအလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်း၊ အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် titration time ၏ pH-titration volume real-time change curve
၂၀၂၀ ခုနှစ် Pharmacopoeia စာစောင်နှင့်အညီလိုက်နာပါ
4. Fields of use Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း
The Potentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း isageneral basic equipment in the laboratory and is widely used. It can be used in food, drug inspection, disease control, commodity inspection, water treatment, petroleum, chemical, marine, electric power, environmental protection, new energy, teaching, scientific research and other related fields .
JiahangPotentiometric titrator အတည်ပြုခြင်း has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။ မင်းကုမ္ပဏီက Potentiometric Titrator Verification လုပ်ခဲ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
hot Tags:: Potentiometric Titrator Verification, China, Factory, Cheap, Advanced, Manufacturers, Suppliers, Price, CE
ဒစ်ဂျစ်တယ် Potentiometric Titrator
အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator အပြည့်